Gaafatmaaan Bulchiinsaa fi Nageenyaa Humna Addaa WBOtiin Ajjeefame. -
(Oromiapress, Ebla 26, 2016) Shawaa Kaabaatti Gaafatmaaan Bulchiinsaa fi Nageenyaa Ona Warra Jaarsoo Humna Addaa WBOn ajjeefame.
Godina Shawaa Kaabaa Ona Warra Jaarsootti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenyaa sirna wayyaanee, kan ummata Oromoo irratti roorrisaa turee fi diina dura bu’uun sochii WBO danquu fi gufuu QBO tahe Baqqalaa Tarrafee jedhamu Ebla 22, 2016 ganda Faajjii Ejersaa jedhamu keessatti tarkaanfii Humni Addaa WBO irratti fudhateen ajjeefamee jira.
Waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Ona Warra Jaarsoo keessatti gaafatamummaan bakka adda addaatti damee milishaa hoogganuu fi ummata fayyaaleyyii maqaa ABO deggertuu fi WBO jajjabeessitu jedhuun hiisisaa, ajjeesisaa fi saamsisaa kan ture ergamtichi wayyaanee Baqqalaa Tarrafee, gocha farrummaa isaa kanaan diinaan badhaafamaa fi faarfamaa akka tures beekuun danda’ameera.
Lukkeen diinaa Baqqalaa Tarrafee tarkaanfii Humna Addaa WBOn Ebla 22, 2016 ajjeefame kun dhiheenya kana waraana wayyaanee dura bu’uun sochii qabsaawota Oromoo sakatta’uu kan jedhuun bakkoota Faajjii Ejersaa, Iliilluu fi Liiban jedhamanitti bobba’uun ummata nagaa irratti miidhaa geessisaa akka tures gabaafameera.
Miliishotni wayyaanee Baqqalaa Tarrafee faana hojii gooltummaaf socho’aa turan wayta tarkaanfiin kun fudhatametti dheessanii akka baqatan hubatameera.
Tarkaanfii Humna Addaa WBOn fudhatametti kana are mootummaan wayyaanee akkuma aadaa isaa waraanaa fi hidhattoota isaa bobbaasee ummata nagaa fi barattoota goolaa fi hidhaatti guuraa jira.
Solomoon Galaalchaa, Adaree Mootii fi Fiqaaduu Baqqalaa kan jedhaman ilmaan Oromoo naannoo tarkaanfiin kun itti fudhatame keessaa qabamanii hidhaman keessatti argaman.
Ergamootni wayyaanee ammas naannoo kana keessa sossohuun ummatni akka hidhamuu fi dararamu godhaa jiran kan saaxilaman oggaa ta’u, Addis Alem Gabbisaa, Mokonnin Bayyanaa fi Taayyee Addunyaa kan jedhaman keessatti argamu.
Ergamtootni diinaa ummata fayyaaleyyii irratti bobba’uun miidhaa jiranii fi gufuu QBO ta’uun dalagaa diinummaatti jiran gocha isaanii kana irraa akka yeroon dhaabbatan Humni Addaa WBO akeekkachiisuun, yo farrummaa kana irraa dhaabbachuu didan hireen Baqqalaa Tarrafee kan isaan mudatu ta’uu hubachiiseera.
6 thoughts on “Gaafatmaaan Bulchiinsaa fi Nageenyaa Humna Addaa WBOtiin Ajjeefame.”
Maaloo yaa Oromoota walii keessan ajjesuu kana cimssaa ittii fufaa. Diinnis keesaa fi alatii issin ajjeesuu cimsee ittii fufaa jiraa. Jabaadhaa hundumtii keessan iyyu! Waaqqayyo waaknii guraacii issin haa jabeessuu. 🙂 🙂
Haaloo qabsaawota Oromoo lama Salaaletti fannifamanii lubbuu diinaa 200’n bahuu qaba. Jabaadhu WBO gaachana fi haalo baasaa kiyya. Haloo lubboo Oromoo baasuun Oromiyaan ni walaboomti.
diina baas says:
kan WBO dura dhabatef kan ummata oromoo dinaf saxilu hundi qorichi saa du’adha! jabadhu WBO KOO rabbi gachana kee haa ta’u mirga namaa hin xuqdhe mirga dhugaaf oromoo maraf falmatta!!
wbon dirumarahu gachena oromoti atidadhabina hin qabdu nutu dadhabodha male.si cina nidhsbana.
soresa Bari says:
Dhiiroo lukkeeleen diinaa olitti xuqaman kanneen akka Addisaalem Gabbisaa, Mokonin Bayyanaa, Taayyee Adunyaa fi kkf warra akeekachiisaafi gorsaan deebi’an miti.
*** Addisaalem Gabbisaa*** inni jedhamu kuni onawwan goodinichaarraa naanna’uun uummata goolaa kan turee fi goolaa jiruudha.
Kana malees jarreen kuni muutummaa wayyaaneef amanamoo waan ta’aniifi oromoo dabarsanii diinaaf laachuu, ajjeesisuu , hiisisuufi gidirsuu waan ta’eef sadarkaa barnootasaanii fi dandeettiisaanii malee aangon itti laatamee warreen dalagaa jiraniidha.
ISHOO! ISHOO! Baga gammaddan!
Kunoo hamma qabsoon waan karaa qabatte fakkaatti!
Kun Oromoo dha jeennee akka durii nama ilmaan keenya fichiisiisu dhiifnee bira darbinaan bilisummaa waan jedhamu yoo irraanfanne wayya.
Otoo qondaaltonni OPDO kan akka Muktar Kadiriif Abaan Duulaas itti dabalamanii caala gaarii ture!